यी हुन् २०७२ सालका हिट १० चलचित्र
काठमाडौं, चैत २५ । नेपालीहरुले २०७२ साल विदा गरेर अब ०७३ साललाई स्वागत गर्ने तयारीमा छन् । विनाशकारी महाभूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीका कारण ०७२ साल नेपालीहरुका निम्ती सबैभन्दा दुःखत र पीडादायी रह्यो । जसबाट नेपाली सिने उद्योग पनि अछुतो रहेन् । काठमाडौंका चलचित्र हलहरु भूकम्पबाट क्षतिग्रत बन्न पुगे जसका कारण नेपाली चलचित्र उद्योगले ठूलो मार खेप्नु पर्यो । पीडा र सास्तीका बाबजुत पनि केही नेपाली चलचित्रहरुले धेरै दर्शकको मन जित्न सफल रहे ।
राष्ट्रिय दोहोरीगीत रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु
गोरखामा संगीत महोत्सव हुने
मुम्बई, चैत २२ । बलिउडकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडाले आत्महत्याको प्रयास गरेको खुलासा भएको छ । उनले एक पटकमात्र नभई दुई–तीन पटक नै आत्महत्याको प्रयास गरेको उनकै प्रवन्धक रहिसकेका प्रकाश जाजुले खुलासा गरेका हुन् ।
गुरुदेव कामतको १९औं एकल शास्त्रीय संगीत
के गर्दैछिन मनिषा कोइराला ?
अम्बर गुरुङ उपचारपछि स्वदेश फिर्ता, राष्ट्रियगान बजाएर सम्मान
सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितले किन न्याय पाएनन् ? आयोगले दियो जवाफ
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । समितिले आयोग गठन भएको १४ महिना वितिसक्दा समेत काम गर्न नसकेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
बलिउडका प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चनले टि–ट्वेन्टी क्रिकेटका विस्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई पाहुना बनाएका छन् ।
‘जीवन काँडा कि फूल’ चलचित्रको छायाकंन सुरु
मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जिवनीमा आधारित चलचित्र ‘जीवन काँडा की फूल’को निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।